Dalal ay Soomaaliya kamid tahay oo laga digay in ay dagaallo ka dhacaan | KEYDMEDIA ONLINE
Dalal ay Soomaaliya kamid tahay oo laga digay in ay dagaallo ka dhacaan
10 dal oo ay kamid tahay Soomaaliya ayaa lagu sheegay in laga cabsi qabo in ay ka dhacaan dagaallo, waxaa kale oo waddamadaasi ka mida waddanka Itoobiya oo daris la ah Soomaaliya
Ururka Dhibaatooyinka Caalamiga ah ee International Crisis Grou(ICG ), ayaa ka digay dhibaatooyin caalami ah oo sanadkan cusub laga yaabo in ay ka dhacan dunida oo dhan.
ICG ayaa sheegtay in illaa 10- dal oo dunida ku taallo sanadkan ay suura gal tagay in ay ka dhacaan dhibaatooyin dagaal oo sababi kara bur-bur baaxad leh.
Dalalka ay ka digtay Hay'addani waxaa ka mid ah Yemen, Ethiopia, Afghanistan, The Sahel, Venezuela, Somalia, Libya, Iran, US, Russia & Turkey.
Laga soo bilaabo cudurka faafa ee coronavirus ilaa saameynta sii kordheysa ee isbedelka cimilada, siyaasadaha guracan ee maamulka Trump ka dib doorashadii Joe Biden, dagaalkii Azerbaijani iyo Armenia ee ka dhanka ahaa Nagorno-Karabakh, iyo dagaalka gobolka Tigreega ee Ethiopia, waxa ay noqdeen kuwa ugu halista badan ee sanadkii dhamaaday 2020 dunida ka dhacay .
Ururka ayaa sheegay in wada hadalo badan oo dhaxdhaxaadin ah ay waddo dowladda Afgaanistan balse waxa suura gal noqon karo ayaa la yiri is faham soo kala dhex gala wada hadalada nabadda ee Afgaanistan iyo kooxda Taliban .
Dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in Ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu qaadayo falal ka baxsan xeeyndaabka sharciga iyo bani-aadannimada kadib dagaalkii November uu ku qaaday gobalka waqooyiga dalkaasi ee Tigreega , waxaa la sheegay in Ciidamada dalka Itoobiya laga saaray cutubyada ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega taas oo ka dhalan karta khilaaf hor leh iyo in ay markale dib isku soo abaabulaan xoogagga Hubeysan ee TPLF oo hadda hoggaan kooda Abiy uu gacanta ku dhigay.
Cooladaha Gobalka Geeska iyo Xasaradaha taagan ayaa lagu yiri waxaa iyana suura gal ah in markale Soomaaliya xaalad adag gasho. Doorashooyinka ku soo fool leh Soomaaliya ayaa laga digayaa, iyadoo khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xubnaha Musharixiinta iyo maamulada qaar, taas oo la sheegay in ay wiiqi doonto dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab kaas oo galaya sanadkiisii shan iyo tobnaad, iyadoo aan la hayn meel uu ku dhammaado, halka deeqbixiyeyaasha ay sii kordhinayaan carada ay ka qabaan bixinta lacagaha ciidamada Midowga Afrika (AU) oo aan wax lagu qaban.
Warbixinta waxa lagu yiri doorashooyinka baarlamaanka waxaa loo qorsheeyay in ay dhacaan bartamaha bisha Diseembar balse dib ayaa loo riixay, iyo u diyaargarowga codbixinta madaxweynaha qorshaheedu uu ahaa Febraayo 2021 sidoo kale iyana dib ayaa loo dhigay.
Waxaa xumaaday xiriirka ka dhexeeya maamulka Muqdisho ku eg iyo qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya, gaar ahaan Puntland iyo Jubaland oo hoggaamiyayaashoodu muddo dheer la tartamayeen Maxamed Farmaajo waxayna ka baqayaan in dib loo doorto. Inta badanna waxaa sabab u ah khilaafaadka ku saabsan awood-qaybsiga, awoodda iyo kheyraadka u dhexeeya labada dhinac.
Khilaafka noocan ah ayaa u muuqda inuu iska horkeenayo beelaha Soomaaliyeed midba midka kale, oo ay ku jirto heer qabiil, iyadoo ay sii kordhayaan hadalada qaraar ee ay adeegsanayaan dhinacyada oo dhan.
Warbixinta ayaa sdioo kale lagu yiri Al-Shabaab, wali wey sii xoogeysanayaan, kooxdu waxay maamushaa qaybo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxayna kordhisaa weerarradeeda, iyagoo si joogto ah u weerara caasimadda Muqdisho. Inkastoo hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo saaxibadooda caalamiga ahi ay dhammaantood garwaaqsadeen, mabda' ahaan, in caqabadda ka yimaada Al-Shabaab aan lagu xallin karin xoog kaligood, haddana in yar ayaa caddayneysa beddelka kale ee jira.
Wadahadalka lala galayo mintidiinta waxay noqon kartaa ikhtiyaar, balse illaa iyo hadda hoggaamiyeyaasha dhaq-dhaqaaqa waxay bixiyeen tilmaan yar oo ah inay doonayaan heshiis diblomaasi.
Qoraalka Soomaaliya ee Warbixinta ayaa waxaa sidoo kale lagu yiri "Si arrimaha taagan loo sii murjiyo, samirku wuu ku siiyaranaya howlgalka Midowga Afrika ee sanadaha badan la dagaallamayay Al-Shabaab". Deeq-bixiyeyaasha sida EU -da waxay ka daaleen inay quudiyaan wax u muuqda olole millatari oo aan dhammaanayn.
Qorshaha hadda socda ayaa ah in mas'uuliyadda ugu horreysa ee amniga lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya dhammaadka 2021, hase yeeshee ciidammadaas ayaa ah kuwo tabar yar oo aan diyaar u ahayn inay hoggaamiyaan dadaallada ka hortagga Al-shabaab. Khatarta faaruqa amni ayaa waxaa sii xumeeyay ka bixitaankii lama filaanka ahaa ee ciidamada Itoobiya sababo la xiriira xiisadda Tigreega iyo qorshaha maamulka Trump ee ah in ciidamada Mareykankauu kala baxo Soomaaliya.
Natijada doorashada Soomaaliya oo noqota mid u dhacda Is-ogol, heshiis iyo si nabdoon ayaa kaliya noqon karta in ay deeqbixiyayaasha ay si rasmi ah u sii wadaan howlaha gurmadka Soomaaliya, haddii ay taasi meeha ka baxdose waxaa suura gal ah saaxibada in ay banneeyaan garabka Soomaaliya.